विश्वकप फाइनल सुपर ओभरमा! | Hamro Khelkud
विश्वकप फाइनल सुपर ओभरमा!
एजेन्सी – इंग्ल्यान्ड र न्युजिल्यान्डबीच जारि विश्वकपको फाइनल खेल सुपर ओभरमा पुगेको छ ।
जितका लागि २ सय ४२ रनको लक्ष्य पछ्याएको इंग्ल्यान्डले अन्तिम बलमा २ रन आवश्यक परेको अवस्थामा दोस्रो रन लिँदा रनआउट भएपछि खेल सुपर ओभरमा पुगेको हो । इंग्ल्यान्ड ५० ओभरमा अलआउट हुँदै २ सय ४१ रन जोड्यो ।
अन्तिम ओभरमा जितका लागि १५ रन चाहिएको अवस्थामा ट्रेन्ट बोल्टले सुरुवाती २ बल डट गरे । त्यसपछि बेन स्टोक्सले तेस्रो बलमा छक्का र चौथो बलमा २ रन लिँदा ओभर थ्रोमा ४ रन जोडीपछि अन्तिम २ बलमा ३ रन आवश्यक परेको थियो । पाँचौ बलमा दोस्रो रन लिने क्रममा आदील रशिद रन आउट भए ।
इंग्ल्यान्डको लागि बेन स्टोक्सले ९८ बलमा ५ चौका र २ छक्का सहित ८४ रनमा अविजित रहे । पाँचौ ओभरको छैटौं बलमा म्याट हेनरीले कट विहान्ड निकाल्दै विकेटकीपर टम लेथमबाट ओपनर जोसन रोयलाई १७ रनमा पेभिलिएन फर्काए । रोयले २० बलमा ३ चौका प्रहार गरे । १७ ओभरको तेस्रो बलमा कोलिन डी ग्राण्डहोमले जो रुटलाई ७ रनमा क्याच आउट गराए । २० ओभरको तेस्रो बलमा लोकी फर्गुसनले ओपनर जोनी बयरस्टोलाई ५५ बलमा ७ चौका सहित ३६ रनमा बोल्ड आउट गरे । २४ ओभरको पहिलो बलमा जेम्श निशमले उत्कृष्ट क्याच गर्दै कप्तान इओन मोर्गनलाई ९ रनमा पेभिलिएन फर्कापछि इंग्ल्यान्ड दबाबमा परेको थियो ।